How'd it happen and more reports?: 2105 Car permit for Myanmar working people oversea
2105 Car permit for Myanmar working people oversea
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေထိုင်သူများ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကားတင်သွင်းမည်ဆိုပါက ကားပါကင် တင်ပြနိုင်မှသာခွင့်ပြုမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြင့် နေထိုင်သူများသည် ကားတင်သွင်းမည်ဆိုပါက ကားပါကင် တင်ပြနိုင်မှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာ နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ ကားသွင်းမယ်ဆိုရင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပေးတဲ့ ကားပါကင်ရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ပါမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ကစပြီး အဲဒီစနစ်နဲ့ သွားမှာပါ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုတည်းအတွက်ပါ။ ကျန်တဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့ ပါကင်ပြစရာမလိုပါဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။
တင်သွင်းမည့်သူများအနေဖြင့် ကားပါကင်ထောက်ခံချက်ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ထွေ/အုပ်ဦးစီးဌာနများတွင် တင်ပြရယူရမည်ဖြစ်ပြီး ကားပါကင်ထောက်ခံချက်ပုံစံများကို သိရှိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ထွေ/အုပ်ရုံးများတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအပြင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမည့်သူအနေဖြင့် ကားတင်သွင်းခွင့်ကို လျှောက်ထားပါက လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကားဝယ်ရောင်းတစ်ဦးက“အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်က ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းလို မြို ပြင်တွေမှာ ဒလ၊ သန်လျင်ဘက်လိုနေရာတွေမှာ မြေကွက်သွားဝယ်ထားပြီး ကားပါကင်အဖြစ်ပြပြီး သွင်းမှာပေါ့။ ဒီလိုပဲ လူတိုင်းလိုက်လုပ်မှာပဲ။ ဒါဆိုရင် ရန်ကုန်ကားကျပ်တာ ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို အဆင့်တွေပိုလာတဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုများသွားနိုင်တဲ့အတွက် ကားဈေးနည်းနည်း တက်သွားတာပဲရှိမှာပါ။ ရန်ကုန်ကားကျပ်တာ ချောင်သွားမယ့် နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း တင်သွင်းရမည့် မော်တော်ယာဉ်များ၏ မော်ဒယ်များကို ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းပါက ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံပြီး အစားထိုးတင်သွင်းမည့်သူများအနေဖြင့် လူစီးကားများ၊ ကုန်ကားများ၊ ခရီးသည်တင်ကားများဆိုပါက ၂ဝဝ၃ မော်ဒယ် မှ ၂ဝဝ၉ မော်ဒယ်အတွင်းကားများကို လည်းကောင်း၊ ၁၃၅ဝ စီစီနှင့်အောက် လူစီးယာဉ်များဆိုပါ က ၂ဝဝ၃ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်း ကားများကိုလည်းကောင်း တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လူတစ်ဦးချင်းပါမစ်ဖြင့် တင်သွင်းမည့်သူများအနေဖြင့် လူစီးကားများ၊ ၁၃၅ဝ စီစီ နှင့်အောက်ကားများ၊ ခရီးသည်တင်ကား (Express) များဆိုပါက ၂ဝ၁ဝ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်း ကားများကိုတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
လူတစ်ဦးချင်းပါမစ်ဖြင့် ကုန်ကားနှင့် ခရီးသည်တင်ကား၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ် (Mini Bus\_ City Bus) များဆိုပါက ၂ဝဝ၅ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်းရှိ ဘယ်မောင်းအမျိုးအစားကားကိုသာ တင်သွင်းရမည်ဟုလည်း သတ်မှတ်ထားသည်။
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထောက်ခံချက်ဖြင့် Taxi လျှောက်ထား တင်သွင်းမည့်သူများအနေဖြင့် ၂ဝ၁ဝ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်းကားများကို တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် လျှောက်ထားတင်သွင်းမည့်ကားများ (FOC စနစ်ဖြင့် ပြည်ပမှလှူဒါန်းသည့် ကားပါမစ်လျှောက်ထားမှု) တင်သွင်းမည်ဆိုပါက လူစီးယာဉ်ဆိုပါက ၂ဝ၁ဝ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်းကားများကို လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားဆိုပါက ၂ဝဝ၅ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်းကားများ၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ လူနာယာဉ်၊ နိဗာန်ယာဉ်များဆိုပါက ၁၉၉၉ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်းကားများကို လည်းကောင်း၊ ခရီးသည်တင် Express ကားများဆိုပါက ဘယ်မောင်းသီးသန့် ၂ဝ၁ဝ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်းကားများကို လည်းကောင်း၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲမည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၊ Mini Bus ၏ City Bus များ ဆိုပါက ဘယ်မောင်းသီးသန့် ၂ဝဝ၅ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်း ကားများကို လည်းကောင်း တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
အစိုးရဌာနများမှ ကားတင်သွင်းရန် လျှောက်ထားပါက လူစီးကား၊ ကုန်ကား၊ လုပ်ငန်းသုံးကား၊ ခရီးသည်တင်ကား၊ ယန္တရားများ အားလုံးအတွက် ၂ဝဝ၅ မော်ဒယ်မှ ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်အတွင်းကားများကို တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ ၂ဝ၁၄ မော်ဒယ်နှင့် ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ် Brand New ကားသစ်များ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက ဘယ်မောင်းသီးသန့်သာ တင်သွင်းရန်သတ်မှတ်ထားကြောင်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မော်တော်ယာဉ်များ၏ Model Year အလိုက် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုမှု ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း(15-12-2014)ရက်နေ့
2015 ဇန်န၀ါရီမစ၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်
(က) ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း အစားထိုးတင်သွင်းမှု့(Consignment) စနစ်အပါအ၀င်
(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၃ မှ ၂၀၀၉ အထိ)
(၂) ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ (၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၅ အထိ)
(ခ) ဘဏ်စာရင်းဖွင့်၊ ဖရီးပါမစ်
(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅ အထိ)
(၂) ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ (၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅ အထိ)
(၃) ကုန်တင်ယာဉ်များ (၂၀၀၅ မှ ၂၀၁၅ အထိ )
(၄) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ express (၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅) ဘယ်မောင်း
(၅) Mini bus, City Bus (၂၀၀၅ မှ ၂၀၁၅) ဘယ်မောင်း
(ဂ) တိုင်းပြည်နယ် ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖြင့် Taxi လျောက်ထားမှု့ 
လူစီး မော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅ အတွင်း )
(င) အစိုးရဌာနများမော်တော်ယာဉ်လျောက်ထားမှု့ 
၂၀၀၅ မှ ၂၀၁၅ အထိ
၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ ရောက်ရှိခုနှစ်နှင့် ရောက်ရှိခုနှစ်အောက် တစ်နှစ်နိမ့် မော်ဒယ် (Brand new) မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းပါက ( ဘယ်မောင်း) သာတင်သွင်းရမည်။
Car permit for Myanmar working people oversea
ကားပါမစ်တွေထုတ်မပေးတော့ဘူးလို့ ကောလဟသသတင်းလေးတွေကြားနေရပြီး သေချာသိချင်လို့ အစိုးရရဲ့ Commerce Website က ကားသတင်းတွေကို ပြန်ကူးယူပြီး နိုင်ငံခြားမှာ အခွန်ဆောင်ထားပြီး ကားသွင်းချင်တဲ့သူတွေကို သတင်းအမှန်တွေကို အသိပေးချင်တာ နှင့် အခုလိုရှာဖွေ တင်ပေးလိုက်တာပါ၊ (အပြင်က ကားပါမစ်ဈေးတွေသိန်း ၆၀-၁၀၀လောက်ဈေးပေါက် နေတော့) ကားပါမစ်လေးပေးနေတုန်း ကိုယ့်နာမည်ပေါက် ကားသွင်းမလို့ စဉ်းစားနေတာ ဘဏ်ကိုသွင်းရမဲ့ invoice ဈေးတွေက အမှန်တကယ်ဝယ်ရမဲ့ ဈေးတွေထက်များနေပါလား! ဒီပုံအတွင်းဘဏ်ကိုငွေသွင်းရရင် မချောင်ပါဘူး! သောာင်းဂဏာန်းကျော် တွေချည်းဘဲ! ဟီးဟီး! မသတ်နိုင်သေးဘူး..ဟူး!......း(
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်း မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်တွင် သွင်းကုန်ပါမစ် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် သိရှိရမည်အချက်များ
Normal စနစ်ဖြင့်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ခြင်းအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းစာအုပ်၏ ပြဌာန်းချက်အရ အပိုင်း(၆) ၊ စာမျက်နှာ(၄၉)တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်မရရှိမီ ကြိုတင် သင်္ဘောတင်ခြင်းအား ခွင့်မပြုသဖြင့်ပြင်ဆင် ချက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် “သင်္ဘောမတင်မီ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်မှသာ အတည်ဖြစ်သည်” ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်း မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်နှင့် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအစားထိုးပါမစ် ထုတ်ပေးမှုအစီ အစဉ်တွင် သွင်းကုန်ပါမစ်ပြင်ဆင်ချက် ဆောင်ရွက်ရာ၌ “အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်း မဆောင်ရွက်မီကာလအထိ ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်မှသာအတည်ဖြစ်သည်” ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ သွင်းကုန် ပါမစ်တွင် အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ID ဖွင့်လှစ်ပြီးကြောင်းရေးသွင်းပြီး ပါက ပြင်ဆင်ချက် ဆောက်ရွက်ခြင်းအား ခွင့်ပြုနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ယာဉ်တင်သွင်းသူများမှ မိမိထံသင်္ဘောတင် စာရွက်စာတမ်းများ BL နှင့် Cancellation စာရွက်စာတမ်းများအရ ကွဲလွဲမှု ရှိ/မရှိ သေချာစွာ ဂရုပြု စစ်ဆေး၍ လိုင်စင်နှင့်ကွဲလွဲချက်များအား အချိန်မီပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ၊ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထာသူ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအား လူစီးမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်အား လွတ်လပ်စွာ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်အား အာဆီယံနိုင်ငံများ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာနှင့်အပြိုင် ခေတ်မီတိုးတက်စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွား ဆက်သွယ်သွားလာမှုများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ပြည်ပနှင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တိုးတက်စေရေး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပြည်ပမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းရှိ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေသော နှစ် (၂၀) သက်တမ်းကျော်လျက်ရှိသည့် ယာဉ်အိုယဉ်ဟောင်းများကို ပြန်လည်အပ်နှံစေပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်ထုတ် မော်တော်ယာဉ်များ ပြည်ပမှအစားထိုး တင်သွင်း ခွင့်ပြုခြင်းကို ဌာနဆိုင်ရာများဖြစ်ကြသည့် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တို့ ပါဝင်သော သက်တမ်းကြာမြင့်မော်တော်ယာဉ်များ ပယ်ဖျက်အပ်နှံ အစားထိုးလဲလှယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့ One Stop Service (OSS) ဖွဲ့စည်းပြီး မော်တော်ယာဉ်အစားထိုး တင်သွင်း ခွင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးခြင်းကို ၁၉-၉-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှစပြီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နေ့မှစ၍ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထုတ် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက် ဆီစားနှုန်းသက်သာသော တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လူစီးကားများကိုလည်း တင်သွင်းခွင့်ပြု ပေးလျက်ရှိပြီး ပြည်ပမှ မော်တော်ကားများ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူတင်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိသူများအား ပြည်တွင်း မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာများတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Sale Center များတွင် ၀ယ်ယူခွင့်ပါမစ်များအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေရရှိထားသူများဖြစ်ကြသည့် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေသော ကုမ္ပဏီ ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြသည့် ကုမ္ပဏီများ ၊ နိုင်ငံခြားတွင် ကာလ ရှည်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် သံတမန်ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြည်ပမှ လူစီးမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ စိစစ်ထောက်ခံပေးပို့ချက်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်သွင်းကုန်ပါမစ်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်မှစတင်၍ မောေ်တ်ာယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ အစီအစဉ်အရ စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ခံစိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်နှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးကိစ္စ္စ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသော ဘဏ်များ တွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်စုဆောင်းထားသူ အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးသူနိုင်ငံသားတိုင်းအား မည်သည့် ၀န်ကြီးဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ မည်သည့်ထောက်ခံစာကိုမျှ ရယူတင်ပြရန် မလိုဘဲ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မှတ်ပုံတင်မူရင်း ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မူရင်းနှင့် ပြည်ပမှ မိမိဝယ်ယူတင်သွင်းလိုသည့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား ၊ ထုတ်လုပ်ခုနှစ် ၊ အင်ဂျင်ပါဝါနှင့် မော်တော်ယာဉ်၏ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဘိုး ဖော်ပြထားသော တစ်ဖက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီ၏ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြေစာ Invoice မူရင်း ၊ မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးအမှန်ရှိသော နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း စာအုပ်မူရင်းနှင့် ယခင်မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သည့် စာရင်းတွင် မပါဝင်ကြောင်း ခံဝန်ကတိပြုချက် တင်ပြရုံဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် (၃) ၊ နေပြည်တော်ရှိ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် သွင်းကုန်ပါမစ် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှလည်းကောင်း ၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားသူများအား ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် အတွက် နေပြည်တော်တွင်သာမက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် နိုင်ငံသားတိုင်းအား မည်သည့် ဌာနထောက်ခံချက်များ မလိုဘဲ မော်တော်ယာဉ် သွင်းကုန်ပါမစ်များ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေခြင်းကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့အထိ တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် ထုတ်ပေးမှုမှာ နေပြည်တော်တွင် (၈၀၈၈) ဦး ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေသကြီးရုံးခွဲတွင် (၇၇၈) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၈၈၆၆) ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။
Taxi အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် Saloon နှင့် Van များအား တင်သွင်းခွင့်ပြုလျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်များဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်အတွင်းက နိုင်ငံသားတိုင်းအား ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ် အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးမှုများအား ရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟု ကောလဟလ ဖြစ်ပေါ်နေမှုမှာ မှန်ကန်မှုမရှိပါကြောင်းနှင့် ပါမစ်ထုတ်ပေးနေမှုကို နေပြည်တော်အပြင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ပါမစ်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ (၁၆-၈-၂၀၁၂) ရက်နေ့အထိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တွင် ခွင့်ပြုအမျိုးအစားအလိုက် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးပြီးစီးမှုကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရ ပါသည် -
စစ်သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ ၁၁၂
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ ၅၇
Sale Center ၀ယ်ယူခွင့် ၈၂၃၄
အငှားယာဉ် (Taxi) ၈၃၈
ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသူများအား ၂၀၀၇ ခုနှစ် Model နှင့် အထက် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း
ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသူများအား ၂၀၀၇ ခုနှစ် Model နှင့် အထက် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှာက်ထား ပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ နေ ပြည်တော်ရုံးချုပ်တွင် သာမက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲအမှတ်၊ ၂၂၈-၂၄၀၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ၃၀-၇-၂၀၁၂ ( တနင်္လာနေ့ ) မှစ၍ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထား သူများအနေဖြင့် အောက်ပါ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ပါရှိရပါမည် -
(က) မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာနှင့် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်
(ခ) မှတ်ပုံတင်/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(ဂ) ဘဏ်စာအုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(ဃ) အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(င) တင်သွင်းမည့် မော်တော်ယာဉ် Invoice မူရင်း
(စ) မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ခွင့်ပြုခဲ့ သည့် စာရင်းခေါင်းစဉ်တွင် ပါဝင်သော သင်္ဘောသားများ ၊ နိုင်ငံခြားတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများ ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ၀န်ထမ်းများအပါအ၀င် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းအား ခွင့်ပြု ပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စာရင်းတွင် မပါဝင်ကြောင်း ခံဝန်ကတိပြုချက် ..
၂၀၀၇ ခုနှစ်မော်ဒယ်နှင့်အထက် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်များ
၂၀၀၇ ခုနှစ် မော်ဒယ်နှင့်အထက် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုင်စင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃) ၊ နေပြည်တော်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ၊ ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် လာရောက်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို Attaced File တွင် အသေးစိတ် ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ....
Procedures for Car Permit by Ko Nge
နေ့စွဲ ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်း သင်္ဘော
သား ကုမ္ပဏီ MOFA ဟိုတယ်/
မျက် အထွေထွေ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အဌား
ထုတ်ပေး Sale Center စုစုပေါင်း နေ
ီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ
၁ စက်တင်ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၃၄
၂ အောက်တိုဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၈၇
၃ နိုဝင်ဘာလ (၂၀၁၁) ၄၇၁၀
၄ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၅၈ ၇၃ ၆၁၃၁
၅ ဇန်နဝါရီလ (၂၀၁၂) ၅၉၆၆ ၁၈၉ ၆၁၅၅
၆ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀၁၂) ၇၄၈၉ ၄၉၄ ၇၉၈၃ ၅၉၄ ၁၄၆ ၁၆၉ ၁၈ ၈
၇ မတ်လ (၂၀၁၂) ၆၈၅၆ ၇၄၃ ၇၅၉၉ ၁၀၁၁ ၁၆၃ ၈၀ ၂၁ ၁၇
၈ ဧပြီလ (၂၀၁၂) ၂၇၂၄ ၃၈၂ ၃၁၀၆ ၁၁၈၆ ၉၃ ၄၉ - ၃၉၀
၉ မေလ (၂၀၁၂) ၃၂၈၅ ၁၅၄၉ ၄၈၃၄ ၅၄ ၁၀၄ ၃၅ ၁၅ ၁၂၂၃ ၆ ၃၉ ၈၁၇
၁၀ ဇွန်လ (၂၀၁၂) ၂၂၁၃ ၁၇၈၉ ၄၀၀၂ ၁၈ ၃၇ ၃ - ၂၆၈
၁၁ ဇူလိုင်လ (၂၀၁၂) ၂၆၅၇ ၂၀၇၄ ၄၇၃၁ ၂ ၁၃ ၄ ၂ ၁၂၁
၂ ၂၆၅၁ ၇ ၂၆၅၈ ၄၀၀
၁၃ ၁.၈.၁၂ ၂၄၂ ၇၄ ၃၁၆ - - - - ၅ - - ၂၃၅ ၁၉ ၂၅၄ -
၁၄ ၃.၈.၁၂ ၉၃ ၆၈ ၁၆၁ - - - - ၈ - - ၁၈၈ ၄၅ ၂၃၃ -
၁၅ ၆.၈.၁၂ ၁၃၆ ၆၃ ၁၉၉ - - - - ၃ - - ၂၁၀ ၅၆ ၂၆၆ -
၁၆ ၇.၈.၁၂ ၁၂၀ ၉၉ ၂၁၉ - - - - ၈ - - ၂၄၁ ၇၆ ၃၁၇ ၅၀
၁၇ ၈.၈.၁၂ ၂၀၄ ၁၁၉ ၃၂၃ - - - - ၅ - - ၂၂၆ ၅၈ ၂၈၄ -
၁၈ ၉.၈.၁၂ ၁၉၉ ၆၆ ၂၆၅ - ၁ - - ၂ - - ၂၁၂ ၆၄ ၂၇၆ -
၁၉ ၁၀.၈.၁၂ ၁၆၃ ၈၈ ၂၅၁ ၁ ၁ - - ၂ - - ၁၇၉ ၉၁ ၂၇၀ -
၂၀ ၁၃.၈.၁၂ ၁၆၀ ၆၃ ၂၂၃ ၁ - - - ၂ - - ၁၈၀ ၉၃ ၂၇၃ -
၂၁ ၁၄.၈.၁၂ ၁၆၅ ၁၁၅ ၂၈၀ - - - ၁ - - - ၂၂၀ ၉၆ ၃၁၆ -
၂၂ ၁၅.၈.၁၂ ၁၈၉ ၇၃ ၂၆၂ - - - - ၁ - - ၂၁၄ ၈၉ ၃၀၃ -
၂၃ ၁၆.၈.၁၂ ၁၂၇ ၁၁၃ ၂၄၀ - ၁ - - ၁ - - ၁၆၁ ၈၄ ၂၄၅ -
စုစုပေါင်း ၅၀၄၇၇ ၈၂၃၄ ၅၈၇၁၁ ၂၈၆၇ ၇၂၁ ၃၄၀ ၅၇ ၂၀၆၄ ၆ ၁၁၂ ၈၀၈၈ ၇၇၈ ၈၈၆၆ ၈၃၈
၂၀၀၇ အထက် (Reconditioned)(Saloon အုပ်စု)
စဉ် Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
2007 2008 2009 2010 2011/2012
၁ Audi A7 U.S.A 40,000.00 44,500.00 49,400.00 54,900.00 61,000.00
၂ Audi A8 Germany 73,000.00 77,000.00 81,000.00 90,000.00 108,000.00
၃ Audi R8 U.S.A 78,000.00 87,000.00 97,000.00 108,000.00 120,000.00
၄ Bentley Continental GT UK 124,000.00 138,000.00 154,000.00 171,000.00 190,000.00
၅ BMW3Series Germany 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 64,000.00
၆ BMW5Series Germany 48,000.00 50,000.00 53,000.00 58,000.00 69,000.00
၇ BMW7Series Germany 53,000.00 56,000.00 59,000.00 66,000.00 82,000.00
၈ BMW 750Li Germany 53,000.00 56,000.00 59,000.00 66,000.00 82,000.00
၉ Cadillac CTS U.S.A 32,000.00 36,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00
၁၀ Chevrolet Camaro U.S.A 26,000.00 29,000.00 32,000.00 36,000.00 45,000.00
၁၁ Chevrolet Equinox LS U.S.A 15,000.00 17,800.00 19,500.00 23,200.00 24,200.00
၁၂ Chrysler 300 U.S.A 23,000.00 26,000.00 29,000.00 30,000.00 31,000.00
၁၃ Ferrari 458 Spider Italy 182,000.00 202,500.00 225,000.00 250,000.00 270,000.00
၁၄ Ferrari California Italy 125,000.00 139,000.00 155,000.00 172,000.00 192,000.00
၁၅ Fiat 500C Italy 12,800.00 14,200.00 15,800.00 17,600.00 19,500.00
၁၆ GM Cadillac STS U.S.A 35,000.00 37,000.00 39,000.00 43,000.00 67,000.00
၁၇ Holden Commodore Australia 11,900.00 13,900.00 15,500.00 18,700.00 26,800.00
၁၈ Honda Accord Japan 21,000.00 22,000.00 24,000.00 26,000.00 51,000.00
၁၉ Honda Airwave Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 27,000.00
၂၀ Honda Civic Japan 12,000.00 13,000.00 13,000.00 14,000.00 24,500.00
၂၁ Honda CR-Z Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 21,000.00
၂၂ Hyundai Acent/ Avante/
I30/ I40 S' Korea 11,000.00 13,000.00 14,000.00 15,500.00 17,500.00
၂၃ Hyundai Equus S' Korea 33,000.00 36,500.00 40,500.00 45,000.00 50,000.00
၂၄ Hyundai Sonata S' Korea 12,300.00 12,900.00 13,600.00 15,100.00 18,000.00
၂၅ Hyundai Grandeur S.Korea 16,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 25,000.00
၂၆ Hyundai New Click, Verna S' Korea 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00
၂၇ Jaguar XJ/ XF UK/ U.S.A 24,000.00 28,000.00 33,000.00 37,000.00 43,000.00
၂၈ KIA Carens/ Forte/ K3/ Cerato/ Cerato Forte/
Shuma S' Korea 11,800.00 13,100.00 14,600.00 16,200.00 18,000.00
၂၉ KIA Optima/ K5 S' Korea 14,400.00 16,000.00 17,800.00 19,800.00 22,000.00
၃၀ KIA Opirus/ K7/ K9/ Amanti S' Korea 16,500.00 18,000.00 20,000.00 22,500.00 25,000.00
၃၁ KIA Morning (1350 CC) S' Korea 2012 Model Only 20,000.00
၃၂ Lexus GS 350 Japan 36,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 55,000.00
၃၃ Lexus LS 460 Japan 51,000.00 57,000.00 63,000.00 70,000.00 78,000.00
၃၄ Maybach 62 U.S.A 140,000.00 155,000.00 171,000.00 188,000.00 207,000.00
၃၅ Mazda Atenza Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 37,000.00
၃၆ Mazda Atenza Sport Japan 19,000.00 19,000.00 20,000.00 22,000.00 38,000.00
၃၇ Mazda Axela Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 30,000.00
၃၈ Mazda Premacy Japan 21,000.00 22,000.00 23,000.00 25,000.00 31,000.00
၃၉ Mazda Roadster Japan 25,000.00 26,000.00 28,000.00 30,000.00 38,000.00
၄၀ Mercedes B Class Japan 26,000.00 28,000.00 29,000.00 32,000.00 57,000.00
၄၁ Mercedes CL600 Japan 77,000.00 80,000.00 84,000.00 93,000.00 146,000.00
၄၂ Mercedes ML 350 Japan 60,000.00 63,000.00 66,000.00 73,000.00 130,000.00
၄၃ Mercedes Benz C Class Germany 39,000.00 41,000.00 43,000.00 48,000.00 60,000.00
၄၄ Mercedes Benz E Class U.K 26,200.00 31,000.00 35,000.00 45,000.00 52,900.00
၄၅ Mercedes Benz S 600 L Germany 104,000.00 109,000.00 115,000.00 128,000.00 160,000.00
၄၆ Mercedes S 350 Germany 61,000.00 64,000.00 68,000.00 75,000.00 94,000.00
၄၇ Mercedes S Class 550 Germany 65,000.00 68,000.00 72,000.00 80,000.00 100,000.00
၄၈ Mercedes Benz, CLS-550 Class Coupe Germany 45,500.00 48,000.00 50,500.00 56,000.00 70,000.00
၄၉ Mercedes Benz, S-500L Germany 72,000.00 76,000.00 80,000.00 88,000.00 110,000.00
၅၀ Mercedes Benz SLK/ SLK-350 Germany 33,000.00 36,300.00 39,900.00 43,900.00 48,300.00
၅၁ Mini Cooper Germany 16,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00 26,500.00
၅၂ Mitsubishi Glant Fortis Japan 12,000.00 13,000.00 13,000.00 15,000.00 29,000.00
၅၃ Mitsubishi Lancer Japan 31,000.00 32,000.00 34,000.00 37,000.00 62,000.00
၅၄ Nissan Bluebird Sylphy Japan 15,000.00 16,000.00 16,000.00 18,000.00 30,000.00
၅၅ Nissan Cima Japan 25,000.00 27,000.00 28,000.00 31,000.00 53,000.00
၅၆ Nissan Fairlady Z Japan 28,000.00 30,000.00 31,000.00 34,000.00 55,000.00
၅၇ Nissan Fuga Japan 32,000.00 34,000.00 36,000.00 39,000.00 53,000.00
၅၈ Nissan GTR Japan 43,700.00 48,600.00 54,000.00 60,000.00 65,000.00
၅၉ Nissan Skyline Japan 28,000.00 30,000.00 31,000.00 34,000.00 58,000.00
၆၀ Nissan Teana Japan 21,000.00 22,000.00 23,000.00 25,000.00 57,000.00
၆၁ Nissan Tida Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 26,000.00
၆၂ Nissan Tiida Latio Japan 6,500.00 6,800.00 7,200.00 7,900.00 26,000.00
၆၃ Porsche Panamera Germany 48,000.00 54,000.00 60,000.00 66,000.00 74,000.00
၆၄ Samsung SM5 S' Korea 10,300.00 11,500.00 12,600.00 13,900.00 15,300.00
၆၅ Subaru Impreza Japan 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 28,000.00
၆၆ Subaru Legacy B4 Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 51,000.00
၆၇ Suzuki Kei Japan 9,000.00 9,400.00 9,900.00 11,000.00 23,500.00
၆၈ Toyota Allion Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 33,000.00
၆၉ Toyota Auris Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 30,000.00
၇၀ Toyota Avalon Japan 26,200.00 29,200.00 32,400.00 36,000.00 40,000.00
၇၁ Toyota Avensis Japan 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 16,000.00
၇၂ Toyota Belta (1300 CC) Japan (2012 Model Only) 20,000.00
၇၃ Toyota Camry Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 43,500.00
၇၄ Toyota Century Japan 37,000.00 39,000.00 41,000.00 45,000.00 167,000.00
၇၅ Toyota Corolla Axio Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00 33,000.00
၇၆ Toyota Corolla LE Japan 12,500.00 13,500.00 14,500.00 16,000.00 19,000.00
၇၇ Toyota Corona Premio Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00
၇၈ Toyota Crown Japan 25,000.00 26,000.00 27,000.00 30,000.00 41,000.00
၇၉ Toyota Crown Majesta Japan 29,000.00 30,000.00 31,000.00 35,000.00 100,000.00
၈၀ Toyota FRS/ Scion GT-
86 Subaru Japan 18,400.00 20,400.00 22,700.00 25,200.00 28,000.00
၈၁ Toyota Lexus GS Japan 32,000.00 33,000.00 35,000.00 39,000.00 96,000.00
၈၂ Toyota Lexus HS-250h Japan 24,300.00 27,000.00 30,000.00 33,000.00 36,300.00
၈၃ Toyota Lexus IS Japan 40,000.00 42,000.00 45,000.00 49,000.00 71,000.00
၈၄ Toyota Lexus LS460 Japan 53,000.00 56,000.00 59,000.00 65,000.00 118,000.00
၈၅ Toyota Mark X Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 50,000.00
၈၆ Toyota Mark x Zio Japan 26,000.00 27,000.00 29,000.00 32,000.00 51,000.00
၈၇ Toyota Premio Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 33,000.00
၈၈ Toyota Prius Hybrid Japan 18,000.00 19,000.00 20,000.00 22,000.00 31,200.00
၈၉ Toyota SAI Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 29,000.00
၉၀ Toyota Lexus SC430 Japan 40,600.00 45,200.00 50,200.00 55,800.00 62,000.00
၉၁ Volkswagen Golf Germany 12,000.00 12,500.00 13,500.00 15,000.00 18,000.00
၂၀၀ရ ခုနှစ်အထက် လူစီးမော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Reconditioned)(Van အုပ်စု)
၉၂ Daihatsu Hijet Cargo Japan 7,900.00 8,300.00 8,700.00 9,600.00 18,000.00
၉၃ Honda Acty Van Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 19,000.00
၉၄ Honda Partner Japan 6,500.00 7,200.00 8,000.00 8,800.00 10,000.00
၉၅ Honda Stream Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 36,000.00
၉၆ Isuzu Como Japan 23,000.00 24,000.00 26,000.00 28,000.00 42,000.00
၉၇ Mazda Bongo Van Japan 26,000.00 27,000.00 28,000.00 31,000.00 42,500.00
၉၈ Mazda Familier Japan 5,200.00 5,400.00 5,700.00 6,300.00 24,000.00
၉၉ Mitsubishi Delica Van Japan 33,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 50,000.00
၁၀၀ Mitsubishi Lancer Cargo Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 35,000.00
၁၀၁ Nissan Ad Van Japan 6,600.00 6,900.00 7,300.00 8,000.00 25,000.00
၁၀၂ Nissan Caravan Japan 16,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 44,000.00
၁၀၃ Nissan Elgrand Japan 37,000.00 39,000.00 41,000.00 45,000.00 64,000.00
၁၀၄ Nissan Presage Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 38,000.00
၁၀၅ Nissan Urvan Japan 28,000.00 29,000.00 30,000.00 33,000.00 40,000.00
၁၀၆ Nissan Vanette Van Japan 7,500.00 7,900.00 8,300.00 9,100.00 19,585.00
၁၀၇ Nissan Wingroad Japan 6,800.00 7,500.00 8,300.00 9,100.00 10,000.00
၁၀၈ Subaru Samber Japan 10,000.00 11,000.00 11,000.00 13,000.00 17,000.00
၁၀၉ Suzuki Alto Japan 6,900.00 7,300.00 7,600.00 8,400.00 16,000.00
၁၁၀ Toyota Caldina Japan 12,500.00 2007 Model Only
၁၁၁ Toyota Corolla Fielder Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 17,000.00 34,000.00
၁၁၂ Toyota Hiace Commuter Japan 33,000.00 35,000.00 37,000.00 40,000.00 55,000.00
၁၁၃ Toyota Hiace Van Japan 31,000.00 32,000.00 34,000.00 38,000.00 42,000.00
၁၁၄ Toyota Isis Japan 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 34,000.00
၁၁၅ Toyota Liteace Van Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 27,000.00
၁၁၆ Toyota Probox/ Succeed Japan 5,200.00 5,400.00 5,700.00 6,300.00 24,000.00
၁၁၇ Toyota Regius Van Japan 33,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 44,000.00
၁၁၈ Toyota Regiusace Van Japan 38,000.00 40,000.00 42,000.00 46,000.00 55,000.00
၁၁၉ Toyota Townace Van Japan 12,000.00 13,000.00 13,000.00 15,000.00 27,000.00
၁၂၀ Alfa Romeo 147 Japan 24,000.00 25,000.00 26,000.00 29,000.00 39,990.00
၁၂၁ BMW 1 Series Germany 17,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 34,500.00
၁၂၂ Daihatsu Boon Japan 6,700.00 7,100.00 7,400.00 8,200.00 14,200.00
၁၂၃ Daihatsu Esse Japan 6,500.00 6,800.00 7,200.00 7,900.00 14,800.00
၁၂၄ Daihatsu Mira Japan 11,000.00 13,000.00 14,000.00 16,000.00 17,000.00
၁၂၅ Daihatsu Sonica Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 22,400.00
၁၂၆ Honda Fit (1500 CC) Japan 7,000.00 7,700.00 8,500.00 9,400.00 10,400.00
၁၂၇ KIA Pride S' Korea 7,000.00 8,000.00 9,000.00 9,900.00 11,000.00
၁၂၈ Mazda Demio Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 34,000.00
၁၂၉ Mazda Verisa Japan 17,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00
၁၃၀ Mercedes Benz A Class Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 25,000.00 38,700.00
၁၃၁ Mini Cooper Germany 12,700.00 13,300.00 14,000.00 15,600.00 19,500.00
၁၃၂ Mitsubishi Colt Japan 9,500.00 10,000.00 11,000.00 12,000.00 18,000.00
၁၃၃ Nissan Dualis Japan 16,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 36,800.00
၁၃၄ Nissan March Japan 13,000.00 14,000.00 14,000.00 16,000.00 21,000.00
၁၃၅ Nissan Note Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00 24,000.00
၁၃၆ Nissan Tiida Japan 16,000.00 16,500.00 17,000.00 19,000.00 26,000.00
၁၃၇ Subaru Pleo Japan 8,200.00 8,600.00 9,000.00 9,900.00 17,000.00
၁၃၈ Subaru R2 Japan 9,300.00 9,800.00 10,000.00 11,000.00 13,500.00
၁၃၉ Suzuki Cervo Japan 9,400.00 9,900.00 10,000.00 11,000.00 14,300.00
၁၄၀ Toyota Aygo Japan 2012 Model Only 19,000.00
၁၄၁ Toyota Blade Master Japan 16,000.00 17,600.00 19,400.00 21,300.00 23,400.00
၁၄၂ Toyota Lexus (CT 200 H) UK 34,000.00 36,000.00 37,000.00 42,000.00 * 52000.00
၁၄၃ Toyota Passo Japan 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 21,000.00
၁၄၄ Toyota Porte Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 17,000.00 27,000.00
၁၄၅ Toyota Ractis Japan 8,100.00 8,500.00 8,900.00 9,800.00 26,000.00
၁၄၆ Toyota Raum Japan 9,900.00 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00
၁၄၇ Toyota Vitz F Japan 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 27,000.00
၁၄၈ Toyota Prius Japan 16,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00 25,000.00
၁၄၉ Toyota Prius C Japan 12,500.00 13,500.00 15,500.00 17,000.00 19,000.00
၁၅၀ Volkswagen Polo UK 13,000.00 14,300.00 15,700.00 17,300.00 19,000.00
မှတ်ချက်။ (၁) 1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို Model Year 2007 မှ 2011 အထိ တန်ဘိုး USD 5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2012 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည် ဆိုပါက
(၂) အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာ သော ယာဉ်များဖြစ်ပါက One StopServices အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်
၁၅၁ Acura Mdx Japan 25,600.00 27,000.00 28,400.00 31,600.00 39,500.00
၁၅၂ Audi Q5 Germany 29,000.00 31,000.00 32,000.00 36,000.00 * 45000.00
၁၅၃ Audi Q7 Germany 30,000.00 33,000.00 36,500.00 41,000.00 45,000.00
၁၅၄ BMW X1 Japan 24,300.00 25,600.00 27,000.00 30,000.00 35,000.00
၁၅၅ BMW X3 Germany 41,000.00 43,000.00 45,000.00 49,000.00 74,900.00
၁၅၆ BMW X5 Germany 42,000.00 47,000.00 52,000.00 58,000.00 63,800.00
၁၅၇ BMW X6 Germany 54,000.00 57,000.00 * 60000.00 64,000.00 * 80000.00
၁၅၈ Cadillac Escalade-Platinum U.S.A 55,000.00 58,000.00 61,000.00 68,000.00 85,000.00
၁၅၉ Cadillac SRX U.S.A 23,000.00 24,000.00 25,000.00 28,000.00 35,000.00
၁၆၀ Chevrolet Captiva U.S.A 19,700.00 21,900.00 24,300.00 27,000.00 30,000.00
၁၆၁ Daihatsu Atrai Wagon Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00
၁၆၂ Daihatsu BEGO Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00 27,000.00
၁၆၃ Daihatsu Move Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 20,000.00
၁၆၄ Daihatsu Move Latte Japan 8,400.00 8,800.00 9,300.00 10,000.00 20,000.00
၁၆၅ Daihatsu Terios Kid Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00
၁၆၆ Ford Edge U.S.A/ Canada 17,700.00 19,700.00 21,900.00 24,300.00 27,000.00
၁၆၇ Ford Explorer Eddie Bauer U.S.A 20,300.00 22,600.00 25,100.00 27,900.00 31,000.00
၁၆၈ GMC Yukon Denali Dubai 36,000.00 40,000.00 44,500.00 49,500.00 55,000.00
China 13,500.00 14,500.00 15,000.00 17,000.00 21,000.00
၁၇၀ Honda Airwave Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 24,300.00
၁၇၁ Honda Cross Road Japan 26,000.00 28,000.00 29,000.00 32,000.00 35,000.00
၁၇၂ Honda CR-V Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 38,000.00
၁၇၃ Honda Elysion Japan 32,000.00 33,000.00 35,000.00 39,000.00 46,000.00
၁၇၄ Honda Step WGN Japan 24,000.00 25,000.00 27,000.00 29,000.00 34,000.00
၁၇၅ Honda Vamos Hobio Japan 7,200.00 7,600.00 8,000.00 8,800.00 22,000.00
၁၇၆ Honda Pilot (SUV) U.S.A 25,000.00 26,000.00 27,000.00 30,000.00 * 38000.00
၁၇၇ Hummer H3 Japan 29,000.00 31,000.00 32,000.00 35,000.00 42,000.00
၁၇၈ Hummer H2 Japan 62,000.00 *65000.00 68,000.00 75,000.00 90,000.00
၁၇၉ Hyundai Veracruz S' Korea 17,500.00 18,500.00 19,400.00 21,600.00 27,000.00
၁၈၀ Hyundia H1 S' Korea 14,500.00 15,000.00 16,000.00 17,500.00 21,000.00
၁၈၁ Hyundai Santafe MLX S. Korea 14,500.00 15,000.00 16,000.00 17,500.00 21,000.00
၁၈၂ Infiniti QX 56 Japan 37,000.00 39,000.00 41,000.00 46,000.00 57,000.00
၁၈၃ Jeep Liberty U.S.A 15,500.00 17,000.00 19,000.00 21,000.00 23,400.00
၁၈၄ Jeep Patriot Japan 12,000.00 13,000.00 14,500.00 16,500.00 18,000.00
၁၈၅ Jeep Wrangူler U.S.A 19,700.00 21,900.00 24,300.00 27,000.00 30,000.00
၁၈၆ KIA/Hyundai Mohave S' Korea 23,000.00 25,500.00 28,500.00 31,500.00 35,000.00
၁၈၇ KIA Sportage/ Tucson/
Tucson IX/ Sorento TLX S' Korea 13,100.00 15,400.00 16,900.00 19,600.00 22,300.00
၁၈၈ Land Rover Landrover Japan/UK 32,000.00 34,000.00 35,000.00 39,000.00 57,000.00
၁၈၉ Land Rover Range Rover Japan/UK 61,000.00 64,000.00 68,000.00 74,000.00 78,500.00
၁၉၀ Land Rover Range Rover (2000 CC) Japan/UK 32,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 * 50000.00
၁၉၁ Lincoln MKT AWD U.S.A 28,500.00 30,000.00 31,500.00 35,000.00 42,000.00
၁၉၂ Lincoln MKX U.S.A 27,500.00 29,000.00 30,500.00 34,000.00 41,000.00
၁၉၃ Lincoln Navigator U.S.A 21,000.00 23,100.00 25,400.00 27,900.00 30,700.00
၁၉၄ Mazda CX-7 Japan 23,000.00 24,000.00 26,000.00 28,000.00 45,000.00
၁၉၅ Mercedes Benz GL-550 Germany 58,000.00 62,000.00 65,000.00 72,000.00 * 90000.00
၁၉၆ Mercedes GL 450 Germany 32,800.00 36,500.00 40,500.00 45,000.00 49,500.00
၁၉၇ Mercedes Benz GLK U.S.A 24,000.00 26,000.00 29,000.00 33,000.00 37,000.00
၁၉၈ Mercedes Benz ML350 (M Class) Germany 51,000.00 53,000.00 56,000.00 62,000.00 * 78000.00
၁၉၉ Mercedes Benz R Class U.S.A 34,500.00 38,500.00 43,000.00 47,500.00 53,000.00
၂၀၀ Mitsubishi Delica D5 Japan 29,000.00 30,000.00 32,000.00 35,000.00 39,000.00
၂၀၁ Mitsubishi Grandis Japan 30,000.00 31,000.00 33,000.00 36,000.00 52,000.00
၂၀၂ Mitsubishi Minica Japan 7,300.00 7,700.00 8,000.00 8,800.00 9,700.00
၂၀၃ Mitsubishi Outlander Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 40,000.00
၂၀၄ Mitsubishi Pajero Japan 25,000.00 26,000.00 27,000.00 30,000.00 61,000.00
၂၀၅ Mitsubishi RVR Japan 13,400.00 14,100.00 14,900.00 16,600.00 20,000.00
၂၀၆ Nissan Ad Wagon Japan 7,700.00 8,000.00 8,400.00 9,300.00 22,000.00
၂၀၇ Nissan Cube Japan 8,700.00 9,200.00 9,600.00 11,000.00 26,000.00
၂၀၈ Nissan Juke Japan 12,100.00 12,800.00 13,500.00 15,000.00 18,000.00
၂၀၉ Nissan Murano Japan 27,000.00 28,000.00 30,000.00 33,000.00 62,000.00
၂၁၀ Nissan Patrol Japan 40,000.00 44,000.00 48,400.00 53,200.00 58,520.00
၂၁၁ Nissan Serena Japan 27,000.00 28,000.00 30,000.00 32,000.00 38,000.00
၂၁၂ Nissan Stagea Japan 23,000.00 24,000.00 25,000.00 28,000.00 50,000.00
၂၁၃ Nissan X-Trail Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 48,000.00
၂၁၄ Porsche Cayenne Germany 76,000.00 * 80000.00 * 90000.00 * 100000.00 * 120000.00
၂၁၅ Porsche Panamera Germany 78,000.00 82,000.00 86,000.00 96,000.00 * 120000.00
၂၁၆ Subaru Forester Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 44,000.00
၂၁၇ Subaru Legacy Touring Wagon Japan 21,000.00 22,000.00 23,000.00 25,000.00 49,000.00
၂၁၈ Subaru Outback Japan 27,000.00 28,000.00 30,000.00 32,000.00 52,000.00
၂၁၉ Subaru Stella Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 19,000.00
၂၂၀ Suzuki Escudo Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 32,000.00
၂၂၁ Suzuki Every Japan 8,300.00 8,700.00 9,100.00 10,000.00 18,000.00
၂၂၂ Suzuki Mr Wagon Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 19,000.00
၂၂၃ Toyota Alphard Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 61,000.00
၂၂၄ Toyota Alphard G Japan 32,000.00 33,000.00 35,000.00 39,000.00 42,000.00
၂၂၅ Toyota Alphard V Japan 34,000.00 42,000.00 44,000.00 48,000.00 52,000.00
၂၂၆ Toyota Bb Japan 18,000.00 19,000.00 20,000.00 23,000.00 25,000.00
၂၂၇ Toyota Corolla Rumion Japan 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 33,000.00
၂၂၈ Toyota Estima Japan 33,000.00 35,000.00 36,000.00 40,000.00 53,000.00
၂၂၉ Toyota Estima Hybrid Japan 41,000.00 43,000.00 45,000.00 50,000.00 55,000.00
၂၃၀ Toyota FJ Cruiser Japan 18,400.00 20,400.00 22,700.00 25,200.00 28,000.00
၂၃၁ Toyota Fortuner Japan 16,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00 25,000.00
၂၃၂ Toyota Harrier Japan 30,000.00 32,000.00 33,000.00 37,000.00 41,000.00
၂၃၃ Toyota Harrier Hybrid Japan 41,000.00 44,000.00 46,000.00 50,000.00 59,000.00
၂၃၄ Toyota Hiace Wagon Japan 29,000.00 30,000.00 32,000.00 35,000.00 52,000.00
၂၃၅ Toyota Highlander/ Highlander
(Cross Over) Japan 21,000.00 23,300.00 25,900.00 28,800.00 32,000.00
၂၃၆ Toyota Hilux Surf Japan 35,000.00 37,000.00 38,000.00 42,000.00 46,000.00
၂၃၇ Toyota Ipsum Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 32,500.00
၂၃၈ Toyota Ist Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 29,000.00
၂၃၉ Toyota Kluger L Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 47,000.00
၂၄၀ Toyota Landcruiser Japan 58,000.00 61,000.00 64,000.00 71,000.00 78,000.00
၂၄၁ Toyota Landcruiser(GXR 8) Japan 39,000.00 41,000.00 43,000.00 48,000.00 * 60000.00
၂၄၂ Toyota Land Cruiser LX10 Japan 23,000.00 26,000.00 29,000.00 32,000.00 36,000.00
၂၄၃ Toyota Landcruiser Prado Japan 36,000.00 37,000.00 39,000.00 43,000.00 53,000.00
၂၄၄ Toyota Lexus IS 250 Japan 30,000.00 33,300.00 37,000.00 40,500.00 44,000.00
၂၄၅ Toyota Lexus GX-460 Japan 34,000.00 36,000.00 38,000.00 42,000.00 53,000.00
၂၄၆ Toyota Lexus GX 470 Japan 45,000.00 47,300.00 49,700.00 54,700.00 65,600.00
၂၄၇ Toyota Lexus LX 570 Japan 51,000.00 53,000.00 56,000.00 62,000.00 * 78000.00
၂၄၈ Toyota Lexus RX, GYL 10W Japan 63,000.00 67,000.00 * 70000.00 77,000.00 92,000.00
၂၄၉ Toyota Lexus RX Series Japan 25,000.00 26,300.00 27,700.00 30,700.00 39,000.00
၂၅၀ Toyota Noah Japan 17,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 34,000.00
၂၅၁ Toyota Rav4 Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 34,000.00
၂၅၂ Toyota Rush Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 28,000.00
၂၅၃ Toyota Sequoia Japan 32,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 * 50000.00
၂၅၄ Toyota Sienna Japan 15,400.00 17,000.00 19,000.00 21,000.00 23,000.00
၂၅၅ Toyota Vanguard Japan 30,000.00 32,000.00 33,000.00 37,000.00 47,000.00
၂၅၆ Toyota Vellfire Japan 29,500.00 32,800.00 36,400.00 40,500.00 45,000.00
၂၅၇ Toyota Vellfire Hybrid Japan 37,500.00 39,500.00 41,500.00 46,000.00 57,500.00
၂၅၈ Toyota Venza U.S.A 17,500.00 18,500.00 19,500.00 21,500.00 27,000.00
၂၅၉ Toyota Verso Japan 15,300.00 17,000.00 18,900.00 21,000.00 23,000.00
၂၆၀ Toyota Voxy Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 34,000.00
၂၆၁ Toyota Wish Japan 16,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 33,000.00
၂၆၂ Chevrolet Avalanche U.S.A 29,500.00 32,800.00 36,400.00 40,500.00 45,000.00
၂၆၃ Dodge Ram U.S.A 15,300.00 17,000.00 18,700.00 20,500.00 22,500.00
U.S.A 30,100.00 31,700.00 33,400.00 37,100.00 46,400.00
၂၆၅ Ford Ranger Thunder U.S.A 14,000.00 15,000.00 16,000.00 17,000.00 20,000.00
၂၆၆ Foton Tunland China 11,800.00 13,100.00 14,500.00 16,200.00 18,000.00
၂၆၇ Honda Ridgeline Japan 23,100.00 24,300.00 25,600.00 28,500.00 34,200.00
China 12,500.00 13,800.00 15,400.00 17,100.00 19,000.00
၂၆၉ Nissan Frontier Thailand 16,000.00 17,600.00 19,400.00 21,300.00 23,400.00
၂၇၀ Toyota Tacoma Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,200.00 29,000.00
၂၇၁ Toyota Hilux Vigo/ Hilux Japan 23,000.00 24,000.00 25,000.00 28,000.00 33,000.00
မှတ်ချက်။ (၁) 1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို Model Year 2007 မှ 2011 အထိ တန်ဘိုး USD 5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2012 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်
ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
၂၇၂ Ford Ranger Japan 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 18,160.00
၂၇၃ Isuzu D-Max Japan 23,000.00 24,000.00 26,000.00 28,000.00 49,300.00
၂၇၄ Mitsubishi L200 Japan 30,000.00 32,000.00 33,000.00 37,000.00 50,000.00
၂၇၅ Nissan Navara Japan 24,000.00 25,000.00 26,000.00 29,000.00 42,000.00
၂၇၆ Toyota Hilux Japan 22,000.00 24,000.00 25,000.00 27,000.00 44,400.00
၂၇၇ Toyota Landcruiser Japan 25,000.00 27,500.00 30,500.00 34,000.00 38,000.00
၂၇၈ Toyota Tundra (Double Cab) Japan 27,000.00 28,000.00 30,000.00 33,000.00 41,000.00
၂၇၉ Toyota Tundra Pickup Japan 30,000.00 31,000.00 33,000.00 36,000.00 43,000.00
မှတ်ချက်။ (၁) 1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို Model Year 2007 မှ 2011 အထိ တန်ဘိုး USD 5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2012 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည် ထား မည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
(၂) အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထား လာ သော ယာဉ်များဖြစ်ပါက One StopServices အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အခွန်နှုန်းထားများ
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ CD
Rate HS Heading
၁ BUS (ယာဉ်မောင်းအပါအ၀င်လူ(၁၀) နှင့် အထက်
စီးနိုင်ပါသည်။) ၃% ၅% 87.02
၂ Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထိ) ၃၀% ၂၅% 87.03
၃ Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထက်) ၄၀% ၂၅% 87.03
၄ Ambulance engine (cc) ခွဲခြားမှုမရှိ ၁% ၅% 87.03
၅ Pick up, Truck, Box Truck,Heavy Truck, Dump Truck,etc:Motor Vehicles for the Transport of goods ၃% ၅% 87.04
၆ Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose motor vehicle) ၁% ၅% 87.05
၇ Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road
Roller etc;(Heavy Vehicles) ၁% ၅% 84.29
မှတ်ချက်။ အမှတ်စဉ် (2 နှင့် 3) ပါ engine displacement 2000 CC အထက်နှင့် 2000 CC အောက်
မော်တော်ယာဉ်များအား အဌားယာဉ် (Taxi) အဖြစ်တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD 3% နှင့်CT 25% ပေးဆောင်ရပါမည်။
မီးသတ်ယာဉ်နှင့် နိဗ်ဗာန်ယာဉ်များ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD/CT (0%) ဖြစ်ပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများ (၂-၄-၂၀၁၂) (၁/၂၀၁၂)
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ
၁ ကုန်တင်ယာဉ်များ (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
၂ ခရီးသည်တင်ယာဉ် (ဘတ်စ်) ၊
(ယာဉ်မောင်းအပါအ၀င် ၁၅ ဦးနှင့် အထက်) ၅%
၃ လူစီးယာဉ် (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up, Micro Bus, Van, MPV, SUV)
(၁၃၅၀ CC နှင့်အောက်) ၅၀%
(၁၃၅၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
(၂၀၀၁ CC မှ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၁၀၀%
(၅၀၀၁ CC နှင့်အထက်) ၁၂၀%
၁ "ပ" အက္ခရာအထိ အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ ၄၀%
၂ "ဗ" အက္ခရာမှ အနှစ် ၂၀ ​ကျော် အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ ၆၀%
၃ စီမံချက်တွင်မပါသော အက္ခရာ Taxi ယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုရန် ၈၀%
၄ ကုမ္မဏီများမှ တင်သွင်းယာဉ်များ (အငှားယာဉ်) ၅၀%
၅ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ်) ၅၀%
၆ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ်မဟုတ်) ၃၀%
၇ လေလံမှတ်ပုံတင်ယာဉ်အပ်နှံ၍အစားထိုးတင်သွင်းယာဉ် ၆၀%
၁ လူနာတင်ယာဉ် ၁၀%
၂ နိဗ်ဗာန်ယာဉ် ၀%